हामीले संविधानसभालाई बहिस्कार गर्ने भनेका छैनौं : मणि थापा
Sat, May 26, 2018 | 15:25:57 NST
15:14 PM (4years ago )
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत, नेकपा माओवादी (मात्रिका) र क्रान्तिकारी कम्यूनिष्ट पार्टी नेपालकाबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ । त्यो कार्यगता एकताका के का लागि हो त ? अनि त्यसको आधार के हो ? यही विषयमा केन्द्रीत रहेर साथी दीपेन्द्र कुँवरले क्रान्तिकारी कम्यूनिष्ट पार्टी,नेपालका महासचिव मणि थापासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
कार्यगत एकता के का लागि ?
पहिलो क्रान्तिकारी कम्यूनिष्टहरुको एउटै केन्द्र बनाउन । दोस्रो नेपालको अहिलेको राजनीतिको कार्यभार संविधान निर्माण भएकोले संविधान बनाउनु आवश्यक छ र संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेको क्रान्तिकारी शक्ति त्यसमा एड्जस्ट हुन चाहान्छ । तेस्रो विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्न र चौथो शान्ति प्रक्रिया र सत्य निरुपण जस्ता विषय ओझेलमा परेकोले त्यसलाई उठाउन कार्यगत आवश्यक भएको हो ।
कार्यगत एकता त कार्यदिशाका आधारमा हुने हो । एकीकृत माओवादी संविधानसभा भित्र र तपाइँहरु बाहिर हुनुहुन्छ । कसरी मिल्छ ?
हो हामीबीच भिन्नता छ । एमाओवादी भित्र छ र हामी ३३ दल बाहिर छौं । हामीलाई चुनावमा जाने अवसर मिलेन । संविधान निर्माण राजनीतिक मुद्दा हो, हामी त्यसमा एडजस्ट हुन चाहान्छौं । त्यसको मिटिङ प्वाईन्ट गोलमेच सम्मेलन वा सभा हुनसक्छ । एकीकृत माओवादीले संविधान सभामा गोलमेच सभाका लागि आधार तयार गर्ने र बाहिर हामीले बनाउने गरी कार्यगत एकतामा जान लागेका हौं ।
तपाईंहरुले त संविधान सभालाई निषेध गरेको हो नि त पहिले के अब त्यो अवस्थामा तपाईंहरु हुनुहुन्न भनेर बुझ्दा हुने हो ?
हामीले संविधान सभालाई अस्वीकार गर्ने भनेका हौं, बहिस्कार र विघटन गर्ने भनेका छैनौं । त्यो जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको केन्द्र भइसेकको छ । डिफ्याक्टोको रुपमा संविधानसभालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । त्यो एउटा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र राजनीतिको एउटा ब्लक हो । हामी अर्को ब्लक हौं । त्यसैले मिलेर जाउँ भनेको हो ।
यो कार्यगत एकता गर्दा तपाइँहरु र एकीकृत माओवादी मध्ये को कति अघि बढ्यो वा को कति पछि हट्यो ?
यो कोही पनि अघि बढ्ने वा पछि हटेर संविधानसभामा छिर्ने वा संविधान सभामा आउने विषय होईन् । कुरा कस्तो संविधान बनाउने ०४७ सालकै जस्तो वा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्याण्डेट अनुसारको ? भन्ने कुरा नै प्रमुख हो ।
तर सीपी गजुरेलजीले त एकीकृत माओवादीलाई संविधानसभा बाहिर ल्याउन कार्यगत एकता हो भन्नुभयो नि त ?
सीपी कमरेडले पूर्वाग्रही भएर बोल्नुभयो भन्ने लाग्छ । हामी ५ वटा पार्टीबीच नै किन कार्यगत एकता भयो त ? यसको रणनीतिक महत्व छ । यहाँ कसैले कसैलाई पूर्वाग्रही भएर हेर्ने होइन, साझा एजेण्डामा जाने हो । पार्टी फूटेको चोटले सीपी कमरेडले त्यस्तो भनेको हुन सक्छ ।
तपाइँका माग एमाओवादीले संविधानसभा भित्र लैजान्छ भने तपाइँहरु उसको के मुद्दा उठाउनुहुन्छ ?
एमाओवादीले संविधान सभा बाहिर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरुको संविधान निर्माणमा भूमिका लागि गोलमेच सभाका लागि संविधानसभा भित्र रहेका दलसँग सहमतिको प्रयास गर्छ र अर्को संविधानको हाम्रो अन्तर्वस्तु भनेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको म्याण्डेट हो हामी त्यसमा एकरुपता ल्याएर अघि बढ्छौं ।
एमाले कांग्रेसले नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृति र बहुधार्मिक अवस्थालाई उपेक्षा गरेर संघीयताको कुरा गरिरहेका छन् । पहिचानको कुरा गर्दा जातीयतातिर कुरा लैजाने कोशिस भैरहेको छ । हाम्रो कुरा बहुजातीय, बहुसांस्कृति र बहुधार्मिक देश भएकोले सबैको भावनाको संबोधन गर्ने गरी संघीयता बनाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसो गर्दा कहीँ जातिको कुरा आउला, कहिँ क्षेत्रको कुरा आउला र कहिँ सांस्कृतिक कुरा प्रधान भएर आउला । तर यो जातीयता होईन, उत्पीडनको सम्बोधन हुनु पर्‍यो भन्ने हो । यसमा एकीकृत माओवादी संविधान भित्र र बाहिर हामी संघर्ष गर्छाैं । तर यसको मिलन विन्दु गोलमेचसभा हुन सक्छ र सहमति गरेर अघि बढ्न सक्छौं ।
उसोभए तपाइँहरु तत्काल धुवीकरण गरेर आफ्नो मुद्दामा शक्ति सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ होईन ?
शक्ति सञ्चय त राजनीतिमा हुने नै भयो ।
गोलमेच सभाका विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग कुरा गर्नुभएको छ ?
मोहन वैद्यजीहरुले कुरा गर्नुभएको छ, सकारात्मक छन भन्ने कुरा आएको छ । संविधान निर्माणमा सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा काँग्रेस एमालेको पनि छ । कार्यगत एकता घनिभूत बनाएको कारण पनि यही हो । तर अहिले थप कुरा भएको छैन् ।
संस्थागत एकताको कुरा संभव छ ? एकीकृत माओवादीको कार्यदिशा संविधान सभाबाट संविधान, मोहन वैद्यजीहरुको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह, तपाइँहरुको पनि झण्डैझण्ड वैद्यजीको जस्तै कसरी होला एकता ?
संस्थागत एकताका लागि नै कार्यगत एकता हो । त्यसको पूर्ण संभावना छ । जनयुद्ध, गणतन्त्र र सघीयताको वाहक शक्ति भएकोले हामी एक भएर जानै पर्छ । तपाँइ अहिले माओवादी आन्दोलनलाई भ्रष्ट–भ्रष्ट जस्तो, वर्ग परिवर्तन गरे जस्तो देख्नुभएको छ नि ? यो परिवर्तन भएर नयाँ शक्तिका साथ आउँछ । नआए विघटन हुन्छ ।संभावना चिन्न नसके खत हुन्छ । तर मलाई के लाग्छ भने यो नयाँ बनेर आउँछ ।
एमाओवादी समाजवादतिरको कुरा गर्दैछ, तपाइँहरु नौलो जनवादी क्रान्तिको कसरी कुरा मिल्ला ?
एकीकृत माओवादीको लाईन अलिकति अल्ट्रा राईट र नेकपा माओवादीको लाईन अलिकति अल्ट्रा लेफट् छ, त्यसैले दुवैको संभावना नभएकोले हामी अहिले वामपन्थी लाईन बनाउने प्रयासमा छौं र त्यो संभावना छ ।
पहिलो कुरा त हामी हिजो एक अर्कालाई निषेध गरेकाहरु एकठाउँमा आईपुगेका छौं । यो परिस्थितिको मूल्याङ्कनको कुरा हो । यो बीचमा एमाओवादी र नेकपा माओवादी दुवैले रियलाईजेशन गरेका छन् । एमाओवादी ठूलो दल हुन्छु भन्दै चुनावमा गएको हो, अर्को जनयुद्धको आधार तयार गर्छु भनेर गएको हो, दुवैले त्यो गर्न सकेनन् । उहाँहरुले वास्तविक धरातल थाहा पाएका छन् । प्रचण्ड र मोहन वैद्यजी दुवैले त्यो रियलाइजेशन गर्नुभएको छ, त्यसैले हामीबीच एकताको संभावना छ ।